Renim-pianakaviana eto Madagasikara Ny 43,9 % ihany no voatsabo ara-dalàna
Tsy misitraka fikarakarana eny anivon’ny tobim-pahasalamana ny ankamaroan’ireo vehivavy sy renim-pianakaviana eto amintsika.
Noho ny hasarotan’ny fiainana no mahatonga izany. Ho an’ireo hiteraka dia tsy vitsy ireo mbola mandeha amin’ny Reninjaza ary manao dokotera tenany na mitsabo tena amin’ny alalan’ny tambavy kosa ireo marary tsotra. Ny 43,9 %-n’ny reny na vehivavy ihany no misitraka fikarakarana eny anivon’ireny tobim-pahasalamana ireny, raha araka ny antontan’isa navoakan’ny UNICEF. Niezaka ny nanatona ireo renim-pianakaviana vao tera-bao teny amin’ny pavaillon Sainte Fleure sy Befelatanana ny faran’ny herinandro teo ireo andriambavilanitry ny orinasa Star, nentiny nanamarihana ny datin’ny 8 martsa, andro maneran-tany ho an’ny vehivavy. Ho azy ireo mantsy dia manan-jo ny hiteraka anaty fahamendrehana sy hahazo fikarakarana ny vehivavy noho izy ireny loharano nipoirana. Miisa 200 ireo vehivavy nahazo tombontsoa tamin’izany izay sady notolorana rano voakarakara manokana anaty tavoahangy mba hanampiana azy ireo. Tao anatin’ny hafaliana no nandraisan’ireo vehivavy vao tera-bao izany, hetsika tafiditra ao anatin’ny asa sosialy entina hanampiana ny mpiara-belona, hiantsorohan’ity orinasa iray ity.